သတိုး: February 2011
Posted by သတိုး at 10:38 AM 16 comments:
အိမ်ရှေ့ရေဆိပ်မှ လှေကလေး ကမ်းကိုခွာလာခဲ့ပြီး လမ်တစ်ဝက်အရောက်မှာပင် မနီးမဝေးဆီမှ ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းသံက ဆီးကြိုလွင့်ပျံရောက်လာနှင့်လေသည်။
``ဖိုးဆေးရေ…ကျောင်းခေါ်နေပြီဟဲ့။ လှေကို မြန်မြန်လေး အားစိုက်လှော်စမ်းပါ´´
အရေးထဲမှာ ဖိုးဆေးက လှေလှော်ရင်းကနေ ရေဆော့နေပြန်သည်။ တစ်ယောက်ထိုင် ဘဲကျောင်းလှေကလေးထဲမှာ မောင်နှမလေးယောက်သား ကျပ်ကျပ်သပ်သပ် ထိုင်လိုက်လာကြတာဆိုတော့ ချောင်းရေက လှေနံကိုတောင် ထိနမ်းမိနေပြီ။ လှေကလေး နည်းနည်းလောက် ဘယ်ညာလူးလိုက်တာနဲ့ ချောင်းရေထဲမှာ စုံးစုံးနစ်မြုပ်သွားတော့မှာလိုပင်။
``ဟဲ့ ရေဆော့မနေနဲ့။ လှေမှောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဖိုးဆေးနော်... ကျောင်းရောက်ရင် ငါ…ဆရာနဲ့ ပြန်တိုင်မှာနော်´´
ခင်မာတို့မောင်နှမတွေအားလုံးက မြစ်၊ ချောင်းကမ်းနားနံဘေးမှာပဲ မွေးဖွားကြီးပျင်းလာခဲ့ကြသူချည်းမို့ ရေတော့မကြောက်ကြပေ။ ရေကူးလည်း ကျွမ်းကျင်ကြသူတွေချည်းမို့ အဖေနဲ့ အမေတို့က အိမ်နဲ့ကျောင်းသို့ နေ့စဉ်အသွားအပြန် ရေလမ်းခရီးကို စိတ်အေးလက်ချရှိကြပါသည်။ ဒါပေမယ့် နန္ဒီလေးလည်း ပါလာသေးတာမို့ ခင်မာက လှေလူးမှာ၊ လှေမြုပ်မှာ စိတ်ပူပန်ပါသည်။
``မြန်မြန်လှော်ပါဟဲ့။ ခုလောက်ရှိ နိုင်ငံတော်အလံတောင် အလေးပြုနေလောက်ပြီ´´
အင်မတန်ကျောင်းတက်ပျင်းသော ဖိုးဆေးကတော့ ခင်မာ့ ပြောစကားများကို ဂရုမစိုက်ပါ။
``ဖိုးဆေးနော် …ကျောင်းနောက်ကျတာ ဆရာမကြိုက်ဘူးဆိုတာ နင်လည်းအသ်ိပဲ မဟုတ်လား။ ငါ…နင့်ကို ဆရာနဲ့ ပြန်တိုင်လိုက်မှာ´´
ဆရာနဲ့ လှည့်ချောက်တော့မှ ဖိုးဆေးတစ်ယောက် လှေကို အားစိုက်လှော်ပါတော့သည်။ ဒါပေမယ့် ကျရေက ရေစီးသန်သန်။ ပြီးတော့ ရေဆန်လည်း ဖြစ်နေသည်။ လေကလေးကလည်း တဖြူးဖြူးဖြင့် ရှေ့ကပင် ဆီးကြိုတိုက်နေပြန်တာမို့ လေလည်းအဆန်ပေ။ လေကွယ်စေရန် ချောင်းကမ်းနံဘေးကပ်လျှက် ဓနိပင်တန်းကို အကွယ်အကာယူကာ အားစိုက်လှော်ရသည်မို့ ဖိုးဆေးတစ်ယောက် ချွေးတွေနစ်လို့လာတော့သည်။ ကျောင်းရှေ့တည့်တည့်ရှိ ရေဆင်းတံတားဆီ ခင်မာတို့မောင်နှမ၏ လှေကလေးဆိုက်ကပ်ချိန်မှာပင် စာသင်ခန်းအတွင်းဆီမှ မင်္ဂလာပါဆရာဟူသော သံပြိုင်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားက ဆီးကြိုနှင့်နေပြန်ပါသည်။
ရေဆင်းတံတားက ချောကျိပစ်ချွဲနေပါသည်။ တက်ရေတုန်းက ချောင်းရေထဲမှာနစ်မြုပ်ခဲ့ရသော ရေဆင်းတံတားမှာ ရေကျချိန်ရောက်တော့ နွံနှစ်တွေတင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ခင်မာသည် နန္ဒီလေးကို ခါးထစ်ခွင်ထားလျှက် လှေဆီမှတံတားပေါ်သို့ လှမ်းအတက်… ဟန်ချက်ပျက်ကာ ချော်လဲတော့မလိုဖြစ်သွားရတာမို့ လန့်ဖျတ်တုန်လှုပ်သွားပါသည်။ နန္ဒီလေးသည်လည်း အဲခနဲ အထိတ်တလန့်အော်ငိုမည်ပြင်တော့သည်။ ခင်မာ့မှာ ပြာပြာသလဲနှင့် ကလေးကိုချော့နေရင်း ချောကျိကျိတံတားပေါ်မှာ ခြေကုပ်မြဲမြဲ၊ ဟန်ချက်ညီညီလှမ်းတက်နိုင်ဖို့ အတော့်ကိုထိန်းသိမ်းနေရသေးသည်။ နှုတ်ကလည်း….
``အေး…အေး…နန္ဒီလေး မငိုနဲ့။ တိတ်….တိတ်…။ ဟဲ့ ဖိုးဆေး…စန္ဒီ့ကို တွဲခေါ်ဦးနော်´´
ပြောမည့်သာပြောရပေမယ့် ဖိုးဆေးလည်း စန္ဒီကိုတွဲခေါ်ရန် လက်နှစ်ဖက်စလုံးမအားလပ်ပါ။ ခင့်မာ့လွယ်အိတ်၊ စန္ဒီ့လွယ်အိတ်နှင့် သူကိုယ်တိုင်၏လွယ်အိတ်ပါ..လွယ်အိတ်သုံးလုံးနှင့် မနိုင်နင်း၊ မအားလပ်နိုင်ရှာ။ ကလေးတွဲလောင်းနှင့် ခင်မာ့လောက်တော့ ကသီးကရွဲဖြစ်မနေပေမယ့် သူလည်းပဲ ကျောင်းတံတားပေါ်မှာ ခြေချော်မလဲပြိုရလေအောင် အတော်ထိန်းလျှေက်နေရသေးသည်။
``စန္ဒီရေ…။ ခဏနေဦးနော်။ ပြီးမှ မမပြန်လာခေါ်မယ်´´
စန္ဒီကတော့ လှေနံနှစ်ဘက်ကိုလှမ်းကိုင်ထားလျှက် ငိုမဲ့မဲ့နှင့် ခေါင်းကလေးညိတ်ပြလေသည်။ နန္ဒီလေးကို ဖိုးဆေးလက်ထဲမှာ ထည့်ခဲ့လျှက် စန္ဒီ့ကို တစ်ခေါက်ပြန်ဆင်းခေါ်ရပြန်သည်။
ကျောင်းခြေရင်းဘက်မှ ခြေဆေးအိုင်မှာ နန္ဒီလေးကို ခါးထစ်ခွင်မပျက်စေပဲ ခြေဆေးရပြန်သည်။ ခြေသလုံးဆီမှာ ကပ်တွယ်ပါလာသော လုံးချောချွဲပစ်မျှော့နက်မဲတစ်ကောင်ကို လက်ညှိုး၊ လက်ခလယ်နှစ်ချောင်းတည်းသုံးကာ ကျင်လည်စွာဆွဲခွာပြီး ဖတ်ခနဲလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ ခင်မတို့မောင်နှမတတွေ ရေစိုစက်လက်ဖြင့်စာသင်ခန်းဆီ အလျှင်စလိုလှမ်းဝင်ခဲ့လိုက်တော့ စာသင်ခန်းအတွင်းမှာ ကြိုရောက်နှင့်နေပြီဖြစ်သော ဆရာက မေးခွန်းပါသော အကြည့်တစ်စုံဖြင့် လှမ်းကြည့်နှုတ်ဆက်လေသည်။
ဆရာပေးလိုက်သော အိမ်စာအကြွေးတွေပုံထပ်ကာ ခင်မာ..စာမရသောနေ့တွေကတော့ များပြားလွန်းခဲ့ပြီ။
``ဆရာ မနေ့က အလွတ်ကျက်ခိုင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာတွေ ကျက်လာခဲ့ကြရဲ့လား´´
အတိုင်အဖောက်ညီစွာ တက်ညီလက်ညီမေးဖြေနေကြသော အတန်းတူ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ခင်မာခေါင်းကို ငုံ့ထားရတော့သည်။
၀ုန်းခနဲ အပြိုင်းအယိုင်း၊ ပြိုင်တူမတ်တပ်ရပ်လိုက်ကြသူတွေထဲမှာ ခင်မာရှေ့ဆုံးက ပါပါသည်။ ဒါပေမယ့် ခင်မာမတ်တပ်ထအရပ်မှာပင် နန္ဒီလေးက ဗြဲခနဲထငိုပါတော့သည်။ ခင်မာသည် အငိုလွယ်သောနန္ဒီလေးအား စိတ်လည်းတိုမိသည်။ သူငိုကြောရှည်လာလျှင် ဆရာကြားသိစိတ်ဆိုးမှာလည်း ကြောက်ရွံ့ရပြန်တာမို့ အလျှင်စလို ကိုယ်ကို ငုံ့ကိုင်းကာ ကလေးကို ကောက်ယူချီပိုးလိုက်ရပြန်တော့သည်။ ဒါပေမယ့် အငိုလွယ်သလောက် စမိလျှင် မဆုံးတမ်းငိုကြောရှည်ကြာတတ်သော နန္ဒီလေးက ချက်ချင်း အငိုတိတ်မသွား။ ခင်မာ့ခမျာ ကိုယ်ကိုဘယ်ညာလွှဲယမ်း၊ ယိမ်းနွဲ့ကာ ခါးပေါ်မှကလေးကို ချော့ချော့မော့မော့ ပြုနေရပြန်တော့သည်။
သူ့ကျောင်းသားတွေမှာ နန္ဒီတို့လို ဘုစုခရုတွေ ကိုယ်စီပါလာခဲ့တာအတွက် ဆရာခမျာလည်း ဘ၀င်မကျနိုင်ခဲ့တာ ခင်မာသိပါသည်။
``ဟေး..ကျောင်းကို ကလေးပေါက်စနတွေ ခေါ်မလာပါနဲ့ကွာ။ မင်းတို့တတွေလည်း အလုပ်အပိုတွေနဲ့ရှုပ်လှပါတယ်။ ဆရာလည်း စာဖြောင့်ဖြောင့် သင်လို့မရဘူး´´
ဆရာ့နှုတ်က ထိုစကားဆိုအပြီး နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ကျောင်းခေါ်ချိန်ကျောင်းသားဦးရေ တစ်ဝက်နီးပါး လျော့ကျသွားခဲ့တော့သည်။ ခင်မာတို့ရွာကလေးက လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ငါးသရောက်ပိုက်လုပ်ငန်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေးကြပါသည်။ ကျောင်းဖွင့်စ မိုးဦးကျကာလများတွင် ယောက်ျားလေးအများစုတို့ ကျောင်းပျက်ကြပါသည်။ ထိုအချိန်က ငါးသလောက် အရအမိရှိချိန်ဖြစ်သောကြောင့် သူတို့တတွေ ငါးသလောက်လှေနဲ့ မြစ်ထဲထွက်လိုက်ကာ ခဲသီးပစ်ကူကြရသည်။ မိုးလည်မှာတော့ ကောက်စိုက်၊ ပျိုးနှုတ်ကြချိန်ဖြစ်လေသည်။ ယောက်ျားလေးတွေက ပျိုးနှုတ်၊ ပျိုးသယ်ရာမှာ ကူကြရပြန်သည်။ မိန်းကလေးတွေက အိမ်မှာ ထမင်းချက်ကြရသည်။ ကလေးထိန်းကူရသည်။ အမိ၊အဖ နှစ်ဦးစလုံးက လယ်ထဲမှာ တစ်နေကုန်ကြရသည်ကိုး။မိန်းကလေးတချို့မှာတော့ လယ်ထဲဆင်းကာ ကောက်စိုက်ကူကြရပြန်သည်။ ပညာလိုလားလွန်းလှသည်မဟုတ်သော်လည်း ကလေးကို ကျောင်းမပျက်စေချင်သော၊ ရက်ကြောရှည်ရှည် ခွင့်တိုင်ရမှာ ဆရာ့ကို အားနာသော မိဘတွေကတော့ ခင်မာတို့လိုပင် ကလေးငယ်ကို ကျောင်းသို့ ထည့်လွှတ်လိုက်တော့လေသည်။ ခင်မာ အပါအ၀င် ကျောင်းသို့ကလေးငယ်ခေါ်လာသူတွေ ဆယ့်ငါးယောက်လောက်ရှိနေပြီ။
သူတကာ သူငယ်ချင်းတွေ သူတို့၏ မောင်၊ ညီ၊ ညီမတွေကို ကျောင်းသို့ခေါ်လာကြတာ စတွေ့ရချိန်ကတော့ ခင်မာလည်း အားကျမိခဲ့သည်ပင်။ အမေက စိတ်မချ၊ ကျောင်းသို့ထည့်မလွှတ်ချင်ခဲ့တာတောင် မရမနေချော့မော့ကာ ကျောင်းသို့ခေါ်လာမိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။
ခုတော့ နန္ဒီလေးကို ကျောင်းသို့ခေါ်မလာချင်တော့ပေ။ ခင်မာ့မှာ စာသင်ချိန်လည်း စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် စာမှာ စိတ်ဝင်စားလို့မရ။ တော်နေကြာရေသောက်မယ်၊ ရှူးပေါက်မယ် အမျိုးမျိုး နားပူနားဆာပြုတတ်သည်။ နေ့လည်မုန့်စားကျောင်းဆင်းချိန်မရောက်မီ မုန့်စားမယ်ဟု ဂျီကျတတ်သေးသည်။ သူ့အလိုမလိုက်ရင် အိမ်ပြန်ချင်တယ်ဆိုကာ အော်ဟစ်ငိုကြွေးတတ်တာလည်း ရှိသေးသည်။ သူမငိုလျှင်ပြီးရောဟု စိတ်ဆုံးဖြတ်ကာ ရသမျှမုန့်ဖိုးကို သူ့အတွက်သာ မုန့်ဝယ်ကြွေးရင်း ခင်မာ့ခမျာ ၀မ်းဗိုက်ဟောင်းလောင်းနေ့ရက်တွေများပြားလွန်းခဲ့ပြီ။ နေ့လည်ခင်း ကစားချိန်တွေမှာလည်း သူ့ကို ထိန်းနေရတာနှင့် စိတ်ရှိသလောက် ဆော့ကစားခွင့်မရပြန်။
တစ်နေ့တစ်လေ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ကာ နန္ဒီလေးကို အိမ်တွင်ထားခဲ့ရန် ခင်မာ ကြိုးစားမိသေးသည်။ ဒါပေမယ့် ခင်မာတစ်ယောက် ကလေးထိန်းမပျက် ကျောင်းတက်နိုင်သည်ဆိုတာ အမေသိသွားခဲ့ပြီ။ နန္ဒီကလည်း ခင်မာမို့ ကျောင်းသွားရန်ပြင်ပြီဆိုလျှင် သူပါ လိုက်ပါရန်အသင့်ဖြစ်နေနှင့်ပြီ။ ကျောင်းမှာက အိမ်မှာထက်ပို၍ အနေအစားချောင်သည်ကိုး။ ခင်မာက သူငိုမည်ကြံတိုင်း အငိုမခံ။ သူဂျီကျလေသမျှ အလိုလိုက် ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ပြီး မုန့်လည်း တ၀စားနေရသည်မဟုတ်လား။
ကလေးတွဲလောင်းနှင့် မနိုင်မနင်းဖြစ်နေရှာသော ခင်မာ့အား ဆရာက ထုံးစံမပျက် စကားဆိုလာပါသည်။
``ကဲ…ခင်မာ။ ထိုင်တော့…။ နောက်နေ့တော့ စာရအောင်ကျက်လာခဲ့ဦးနော်´´
တကယ်တမ်းမှာ ခင်မာသည် စာညံ့သူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါပေ။ အတွက်အချက်လည်ဝယ်ချက်ချာသလို စာကျက်ရာမှာလည်း အလွန်မြန်ပါသည်။ စာတစ်ပုဒ်ကို စိတ်ပါလက်ပါ ကျက်မှတ်လျှင် အချိန်ခဏအတွင်း ရလွယ်သူဖြစ်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် ခင်မာ့မှာ စာကျက်ချိန်၊ သင်္ချာတွက်ရန်အချိန်တွေ မရှိသလောက် ရှားပါးလွန်းနေသည်။ ခင်မာတို့အဖေရော၊ အမေပါ တစ်နေကုန်လယ်ထဲဆင်းနေကြရသည်။ ခုချိန်က လယ်စိုက်ချိန်မို့ အလုပ်အရှုပ်ဆုံးအချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်။ အဖေက သူတပါး၏လယ်မှာ သူရင်းငှား အလုပ်သမားမျှသာဖြစ်ပါသည်။ အမေကတော့ ကောက်စိုက်သမ နေ့စားလိုက်နေတာဖြစ်သည်။
မိဘနှစ်ပါးစလုံး လယ်ထဲဆင်းသေားအခါ အိမ်မှုကိစ္စ အ၀၀တို့မှာ အစ်မကြီးအရာတွင် ရှိနေသော ခင်မာ့ ပခုံးပေါ်မှာသာ ကျရောက်လာပါတော့သည်။ နံနက်လင်းတာနဲ့ ခင်မာ ထမင်းအိုးတစ်လုံးတော့ မဖြစ်မနေ ခွင်ပေါ်ရောက်အောင် တင်ရသည်။ ဟင်းကိုတော့ အမေက ညဦးကတည်းက ကြိုတင်စီမံခဲ့တာမို့ ထပ်နွှေးရုံ။ မဟုတ်လျှင်လည်း အသီးအရွက် တမျိုးမျိုး ရောထည့်ရုံမျှသာ။
အဓိကကတော့ နန္ဒီလေးကို ထိန်းကျောင်းရင်း သူမ၏ ဝေယျာဝစ္စ၊ အလတ်နှစ်ယောက်၏ ဝေယျာဝစ္စများဖြင့် အအားမနေရခြင်းသာ။
``ဖိုးဆေးရေ။ ကျောင်းသွားချိန်နီးနေပြီ။ ရေချိုးတော့´´
ဒုတိယတန်းကျောင်းသား ဖိုးဆေးအတွက်တော့ နှုတ်ဖြင့်ပြောရုံသာ။ တစ်ခွန်းပြောရုံဖြင့်မရလျှင် အမေ့ကို အတုခိုးကာ အဆဲအဆို၊ အကျိန်းအမောင်းကလေးတွေလည်း ထည့်ပြောရတာတော့ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် စန္ဒီနှင့် နန္ဒီတို့အတွက်တော့ ခင်မာကိုယ်တိုင်လုပ်မပေးလို့မှ မရ။
အဖေနဲ့ အမေတို့ တိုင်ပင်နေကြတာ တစ်စွန်းတစ်စ ကြားရုံမျှနှင့်ပင် ခင်မာငိုကြွေးဆန္ဒပြခဲ့ရသေးသည်။ ဆရာကလည်း ……
``ဒီတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တာ။ ကလေးကို မူလတန်းကုန်အောင်တော့ထားပေးပါဗျာ။´´
…ဆိုလေတာမို့ ခင်မာတစ်ယောက် ခုထိ ကျောင်းတက်နေရသေးတာဖြစ်သည်။ မဟုတ်လျှင် ထမင်းချက်ရင်း၊ ကလေးထိန်းရင်း လက်သင်ကောက်စိုက်သမ ဖြစ်နေပေတော့မည်။
ဒီနေ့တော့ ခင်မာတစ်ယောက် ကျောင်းတက်ရန်စိတ်စောကာ အိပ်ယာမှ နံနက်အစောကြီး နိုးနေခဲ့လေသည်။ မနေ့က ဆရာပေးလိုက်သော အိမ်စာအားလုံးကို ညည့်နက်ခံကာ ပြီးပြတ်အောင် လုပ်ထားပြီးပြီ။ ဒါတောင်အမေက…
``ဟဲ့ ခင်မာ မအိပ်သေးဘူးလား။ ဘက်ထရီအားကုန်တော့မယ်´´
``အင်းပါ အမေရဲ့။ခုပဲ သိမ်းတော့မှာပါ´´
ဆိုကာ အိမ်စာတွေဆက်လုပ်နေတာမို့ ဘက်ထရီအားကုန်မှာ နှမျောနေသော အမေက အိပ်ယာထဲမှနေကာ တဖျစ်တောက်တောက်လုပ်နေပြန်သေးသည်။
``ဟဲ့ မီးလင်းရင် ငါ မအိပ်တတ်ဘူး´´
..ဆိုကာ ဇွတ်ပင် ခင်မာ့အား အိပ်ယာဝင်စေတော့သည်။
စူပွပွဖြင့် အိပ်ယာသို့ မ၀င်ချင့် ၀င်ချင် ၀င်ခဲ့ရသော ခင်မာသည် ဒီနေ့နံနက်မှာလည်း အိပ်ယာမှစောစောထကာ စာတွေ အော်ကျက်နေပြန်တော့သည်။
``ခင်မာ …နောက်နေ့တော့ စာရအောင်ကျက်လာရမယ်နော်´´
နေ့စဉ်မပျက်သော ဆရာ့၏ အမှာစကားတွေကို ခင်မာမမေ့ပါ။ ဆရာ့အား ရှက်ရွံ့အားနာလှပါပြီ။ ထို့ကြောင့် ဒီနေ့တော့ ခင်မာ စာရအောင် မနားမနေကျက်မှတ်အာဂုံဆောင်ထားခဲ့ပြီ။ ကျောင်းသို့ရောက်လျှင် ဆရာ့ရှေ့မှာ ဂျောင်းဂျောင်းပြေးအောင်ပင် စာတွေ အလွတ်ပြန်ဆိုပြလိုက်မည်။ နေ့တိုင်းနှင့်မတူခြားနားစွာ စာတွေရနေသော ခင်မာ့ကိုကြည့်ကာ ဆရာ…အံ့သြ၀မ်းသာနေမှာလား။ အမေလည်း ကိုယ်တွေလက်တွေ ညောင်းညာကိုက်ခဲနေတာကြောင့် ဒီနေ့လယ်ထဲမဆင်းနိုင်ဟု ညဦးကတည်းက ညည်းငြူပြောဆိုနေတာ ခင်မာ ကြားမိသည်။ အမေ အလုပ်မဆင်းဖြစ်လျှင် နန္ဒီလေးကို အိမ်မှာထားခဲ့လို့ ရမည်ထင်၏။ အမေ့အတွက် ထမင်းအိုး တစ်လုံးတော့ ကျက်အောင်ချက်ပေးခဲ့ရဦးးမည်။
ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေမိသော ခင်မာသည် ဆန်ထည့်သိမ်းနေကျ စဉ့်အိုးငယ်ထဲသို့ လက်နှိုက်လိုက်စဉ် ဟင်ခနဲ စိတ်ပျက်သွားရတော့ကာ…
ခင်မာတစ်ယောက် မူပျက်စွာ ပျာယာခပ်နေသလောက် အမေကတော့ မထူးဆန်းလှသလို အေးဆေးစွာပင် အိပ်ယာထဲမှနေ စီမံပေးနေပြန်တော့သည်။
ခင်မာသည် အမေ့စကားအတိုင်း နာခံမပျက်သော်လည်း နှုတ်ကတော့ အမေမကြားအောင် စူပွပွလုပ်နေမိပြန်သည်။
အမေ့အစီအစဉ်အရ အဖေအလုပ်လုပ်ရာနောက်သို့ လိုက်သွားရတော့မည်။ အလုပ်ရှင်ထံမှာ အဖေက အကျိုးအကြောင်းပြောဆိုပြီးယူပေးမည့် ဆန်ထုတ်နှင့် ငွေးကြေးကို အိမ်ပြန်ယူလာရမည်။
``အရီးညွန့်တို့ ကုန်စုံဆိုင်ပါ တစ်ခါတည်း ၀င်လာခဲ့။ အကြွေးစာရင်းအားလုံး ပေါင်းခိုင်း ။ ပြီး..နင့်အဖေပေးလိုက်တဲ့ငွေထဲက မျှပြီး တချို့တ၀က် ဖဲ့ဆပ်ခဲ့။ ဆီနဲ့ ငြုပ်သီး။ အော် မန်ကျီးသီးလေး ငါးကျပ်သားလောက်ပါ ထည့်ဝယ်ခဲဦး´´
အဖေ့အလုပ်ရှိရာ ချောင်းဖျားအထိ သွားရမည့်ခရီးက မနီးလှပါ။ ပြီး ဇီဇာကြောင်ကာ ကပ်စေးနဲလှသော အဖေ့အလုပ်ရှင်က အဖေ့လုပ်အားခထဲမှ ခုနှိမ်ရမည်ဖြစ်သော ဆန်နှင့်ငွေကို ချက်ချင်း ပေးလိုက်ဦးမှာမဟုတ်။ အီးရောဆွဲကာ ခိုလိုညည်းငြူနေဦးတော့မှာ။ အပြန်မှာ အဖွားညွန့်ဆိုင်သို့ဝင်ကာ ကြွေးဟောင်းဆပ်၊ ကြွေးသစ်မှတ်စေကာ စာရင်းရှင်းရဦးမည်။ အိမ်ပြန်လာ အမေ့ကို ချက်ပြုတ်ပေး…။ ကိစ္စအားလုံးပြီးစီးချိန်မှာ ခင်မာတို့ကျောင်းက နေ့လည် မုန့်စားကျောင်းပင် ဆင်းတော့မည်။ ခင်မာ..ဒီနေ့ ကျောင်းမတက်ရပြန်ဘူးလား အမေ။ ကျောင်းတက်ပျင်းသော ဖိုးဆေးကတော့ ပျော်နေသလားတောင်မသိ။ ကျောင်းမှာသင်ပေးသော ကဗျာတွေကို သူငယ်တန်းမ စန္ဒီနှင့် နှစ်ယောက်သား သံပြိုင်ပင် ဆိုနေလိုက်သေးသည်။
`` ဆွမ်းအုပ်နီနီ အမေရွက်လို့
နက်ဖြန်၊ မနက် ကျောင်းထွက်မယ်….
ရုတ်တရက်တော့ ခင်မာလည်း စိတ်ပါသွားရကာ…
``ဟဲ့ ဖိုးဆေး...ဆွမ်းအုပ်နီနီ အမေရွက်လုိ့
နက်ဖြန် မနက် ကျောင်းတက်မယ် လို့ပြောင်းဆို´´
``ဟာ..ငါတို့ကို ကျောင်းမှာ သင်တာ နက်ဖြန် မနက် ကျောင်းထွက်မယ်ပဲ။ ဆရာကတောင် ရှင်းပြသေးတယ်။ ကျောင်းထွက်မယ်ဆိုတာ သီလယူဖို့ ဥပုသ်ကျောင်းကို သွားကြတာတဲ့ ´´
ဖိုးဆေးဆိုနေတဲ့ ကဗျာက အမှန်ပဲလို့ ခင်မာလည်း သိပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဖိုးဆေးကို အဲလိုမဆိုစေချင်။
``ဟဲ့ ကျောင်းတက်မယ်လို့ ဆိုပါဆို´´
ဘာကိုမှန်းမသိ။ စိတ်တို၊ အလိုမကျသလိုဖြစ်လာရကာ ဖိုးဆေး၏ဦးခေါင်းကို ဒေါက်ခနဲမြည်အောင် လက်ဆစ်ကလေးနှင့် ခေါက်ချလိုက်မိတော့သည်။
ဖိုးဆေး၏ ဗြဲခနဲ အော်ဟစ်ငိုယိုသံ၊ အမေ့ မြည်တွန်ဆူပူသံတွေကို နောက်ချန်ရစ်ခဲ့ကာ ခင်မာတစ်ယောက်ကတော့ ချောင်းငယ်လေးထဲမှာ လှေကလေးကို အားကုန်ကျုံး၍ လှော်ခတ်လျှက် ရေဆန်၊လေဆန်ခရီးကို ဆန်တက်နေပြန်တော့သည်။ နှုတ်မှလည်း…
နက်ဖြန်၊ မနက် ကျောင်းတက်မယ်´´
*****ကျွန်တော့်ပို့စ်ပါ ကဗျာစားသားကို ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ အကြိမ်ကြိမ်အမှားပြင်ပေးကြသော ညီငယ် `ပိုင်´ နှင့် သူ့မိတ်ဆွေတို့ကို ကျေးဇူးတင်စွာ အမှတ်ရနေပါမည် ...။
Posted by သတိုး at 9:14 AM5comments: